Malunga nathi -Gopod Group Holding Limited
Ngathi Iprofayile yekhampani Imbali yeNkampani Amabhaso aHloniphekileyo Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi Isatifikethi semfundo Izixhobo zeFektri
Yasekwa ngo-2006, i-Gopod Group Holding Limited yinkampani eyaziwayo kwilizwe liphela ene-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kweekhompyuter kunye nezixhobo zefowuni eziphathwayo. Sineefektri ezimbini eShenzhen naseFoshan ezigubungela indawo iyonke yeemitha zesikwere ezingama-35,000, ezinabasebenzi abangaphezulu kwe-1,500. Ngapha koko, sakha ipaki yoshishino oluphezulu lwe-350,000-square-meter e-Shunde, eFoshan.
I-Gopod inonikezelo olupheleleyo kunye nokuveliswa kwetyathanga kunye neqela eliphezulu le-R & D elinamalungu angaphezu kwe-100, sinikezela ngeenkonzo zokwenziwa kwemveliso ngokubanzi ukusuka kuyilo lweshishini, uyilo loomatshini, uyilo oludibeneyo lwesekethe, uyilo lwesoftware ukuyila ukukhula kunye nokuhlangana kwemveliso. Inkampani ineeyunithi zeshishini kubandakanya i-R & D, ukubumba, ukuvelisa intambo, iworkshop yetshaji yamandla, iworkshop ye-CNC yentsimbi, i-SMT kunye nendibano. Kwaye sifumene i-IS09001: 2008, i-ISO14000, i-BSCI, i-SA8000 kunye nezinye izatifikethi, kunye ne-arsenal enkulu yamalungelo abenzi.
Ngo-2009, umzi-mveliso waseGopod Shenzhen wafumana isiqinisekiso se-MFi kwaye waba ngumenzi wesivumelwano sika-Apple.
Ngo-2019, iimveliso zeGopod zangena kwinethiwekhi yentengiso yeVenkile ye-Apple kwaye zithengisa kakuhle eMelika, eYurophu, e-Australia, eJapan, eKorea, njl. Njl. Njl. Eyona nto ithengwayo, iFry's, iMakethi yeMedia kunye neSaturn.
Sineqela leenkonzo zobuchwephesha, imveliso ephezulu kunye nezixhobo zovavanyo, amandla emveliso ephezulu kunye nenkqubo yolawulo esemgangathweni esemagqabini, esenza ukuba sibe liqabane lakho elifanelekileyo.
2021 Siqhubeka ngokuya phambili.
2020Ngaphandle kokubethwa ngumoya obangelwe bubhubhane we-COVID-19 ngo-2020, siphumelele ukukhula ngokuthe ngcembe enyakeni, ngenxa yemizamo emanyeneyo yabo bonke abasebenzi bethu.
2019Sazisa iprojekthi yokuqala kwitshaja ye-100W yeGaN, ngenkxaso-mali yezihlwele ukuya kuthi ga kwi-US $ 2.45 yezigidi. Sizise iimveliso zethu ezinxulumene ne-USB-C kwiVenkile yeApple kwaye ke sabona ukutsiba okukhulu kwintengiso. Ukuza kuthi ga ngoku, sineeprojekthi ezili-12 kwiVenkile yeApple.
2018Sihambise ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeemveliso ze-USB-C HUB, zibekwa kwindawo ephezulu kushishino. Iyunithi yethu yeshishini lamandla yasekwa yaze emva koko yafumana amalungelo awodwa omenzi wechiza lokumiselwa kwayo iPowerHUB kunye nePowerBank HUB, kuzisa inani elipheleleyo lamalungelo abenzi bethu ngaphezulu kwe-150.
2017Sibone ukukhula okumandla kweshishini, ngentengiso egqithe kwi-US $ 100 yezigidi okokuqala. Sihambise ezona mpahla zinkulu ze-USB-C kumzi-mveliso.
2016IGopod yaphuculwa ukuze ibe lilungu le-HDMI / USB-IF / QI / VESA. Inkxaso-mali yokuthengisa izihlwele ngaphambi kokuthengiswa kwe-USB-C yethu ifikelele kwi-US $ 3.14 yezigidi, eyona inkulu kolu shishino.
2015IGopod iphumelele i-CES yeeMveliso eziBalaseleyo zoYilo kwaye uthotho lwayo lwe-USB-C lwafumana imbasa ye-IF yoyilo. Ikwaphucule i-MFi ukuya kwi-V6.4. Iifektri zayo zafumana iziqinisekiso ezinje nge-ISO9000 / 14000 kunye neBSCI.
2014I-Gopod isungule imveliso eqinisekisiweyo yokuqala ye-MFi, ngenkxaso-mali yezihlwele ukuya kuthi ga kwi-US $ 2 yezigidi. Yayiyindawo yokugcina ethengisa kakhulu yohlobo lwayo emhlabeni.
2013IGopod iseke iyunithi yokuvelisa izixhobo ezichanekileyo. Ifakwe isixa esikhulu izixhobo zobungcali, iyunithi ezizodwa kwimveliso yentsimbi ezifana aluminium ingxubevange.
2012I-Gopod yasungula iyunithi yeshishini lentambo, ekhethekileyo kwimveliso yeentambo ezahlukeneyo kubandakanya iintambo ze-MFi eziqinisekisiweyo ze-USB.
2011IGopod iphumelele iMbasa yokuYila iMveliso e-CES e-US Ikwaqalise nebhetri yokuqala eqinisekisiweyo ye-MFi.
2009I-Gopod ifumene isatifikethi se-MFi sika-Apple kwaye yaqala ukuphuhlisa kunye nokuvelisa izixhobo eziqinisekisiweyo zefowuni
2008IGopod ihlaziye isicwangciso sayo sokugxila kwimveliso yezixhobo zefowuni eziphathwayo.
2006I-Gopod yasekwa, igxila kwi-R & D, kwimveliso kunye nasekuthengiseni izixhobo zekhompyuter.